चरा पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै आकर्षक छ पोखरा – Sulsule
सुलसुले २०७७ कात्तिक २३ गते १५:२४ मा प्रकाशित
पर्यटकीय नगरी पोखरा तालैतालको शहर हो । यहाँका नौओटा ताल रामसारमा सूचीकृत छन् । पोखराको बीच भाग भएर बग्ने सेती नदी, फुस्रेखोला हुँदै दक्षिण भेगस्थित सुरौदी लगायतका खोलानाला महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्र हुन् । पोखरा आसपासका क्षेत्रका साथै हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ हुँदै बग्ने काली गण्डकीसहितका विभिन्न जलसम्पदाले गण्डकी प्रदेशकै गरिमा र महत्व बढाएको छ ।
विशेषतः जाडो छल्न चीन, मङ्गोलिया, साइबेरियालगायतका स्थानबाट पोखराका तालतलैयामा हिउँदे चरा आउने गरेका छन् । पोखराको फेवासहित यहाँका बेगनास, रुपा, खास्टे, कमलपोखरी, गुदे, निउरेनी, दिपाङ र मैदीतालमा प्रत्येक वर्ष पाहुना चरा आउने गरेको पोखरा पक्षी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेले राससलाई बताए । पछिल्ला वर्षमा पाहुना चराको सङ्ख्या भने घट्दै गएको उनले बताए । सिमसार र आसपासका क्षेत्रमा विचरण तथा प्रजनन् गर्ने चराका प्रजाति वातावरण प्रदूषण एवं सिमसारमा हुने गरेको अतिक्रमणका कारण सङ्कटमा परेको उनले बताए ।
हिउँद शुरु भएसँगै चीन, मङ्गोलिया, साइबेरियालगायतका स्थानबाट हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोम, कागबेनी हुँदै छिर्ने क¥याङकुरुङ पछिल्ला वर्षमा कम देख्न थालिएको छ । ठूला ठूला झुण्डमा आउने क¥याङकुरुङ पोखराहुँदै काली गण्डकी उपत्यका पार गर्दै भारतको राजस्थान लगायतका स्थानमा पुग्ने गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । पोखरा र आसपासमा क-याङकुरुङ आउँदा र फर्कदा उनीहरूको झुण्डलाई हेर्दै लहरे बाली लगाउने हो भने त्यसले राम्रो उत्पादन दिने जनविश्वास अझै पनि कायमै छ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित देवपूजे ढुङ्गालाई प्रत्येक वर्ष क¥याङकुरुङ आउँदा र जाँदा अनिवार्य घुमेर जाने गरेको त्यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।
यसअघि २०७४ सालको हिउँदमा फेवातालमा गरिएको चरा गणनामा ४२ प्रजातिका चरा भेटिएकामा हाल तीमध्ये तीन प्रजाति घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अध्ययनले केही वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशत चरामा कमी आएको देखाएको छ । पछिल्ला वर्षमा जलाधार क्षेत्रमा पहेंला टाउके हाँस, सुन्जुरे हाँसलगायतका चराका प्रजाति कम देखिन थालेको अध्ययनले देखाएको छ । पोखरा पन्छी समाजका सल्लाहकार हठन चौधरी, अध्यक्ष घिमिरे र सचिव हेमन्त ढकालले पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा लामो समयको चरा अध्ययनलाई समेटेर लेखिएको सचित्र पुस्तकमा पोखरा उपत्यकामा ४६७ प्रजातिका चरा पाइने उल्लेख गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा हालै दुई सय वर्षमा चार पटक देखा परेको दुर्लभ लम्काने लाटोकोसेरो (लङ यर्ड उल) भेटिएको छ । घरपझोङ गाउँपालिका वडा नं. ५ ठिनीका युवा एवं राष्ट्रिय समाचार समितिका मुस्ताङ समाचारदाता निरज थकालीले स्याउबारीबाट देखिएको उक्त लाटो कोसेरोलाई भिडियोमा कैद गरेको हो ।
यसअघि २१ वर्ष पहिला यसप्रकारको प्रजाति अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पिपरमा भेटिएको भए पनि त्यसको कुनै फोटो वा भिडिओ भने सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । करिब ५८ वर्ष अघि काठमाडौँको ककनीमा यो प्रजातिको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा १९ औं शताब्दीमा सर ब्राईन हगसनले यसको नमूना अभिलेख गरेको भन्ने भनाइ छ ।
लामो समयपछि भेटिएको यो प्रजातिले लाटोकोसेरो संरक्षणकर्मीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने प्रकृतिका साथीहरूका निर्देशक राजु आचार्यले बताए । थकालीले खिचेको भिडियो अनुसन्धानकर्मीको अध्ययनबाट लामकाने लाटोकोसेरो भएको निष्कर्षमा पुगिएको आचार्यले बताए । नेपालमा पाइने २३ प्रजातिका लाटोकोसेरोमध्ये यो एक रहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरासहित हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङदेखि तराईको नवलपुरसम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेश चरा पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताउँदै आचार्यले यसको प्रवर्द्धन र विकासमा राज्यको चासो पुग्नुपर्ने बताए । “गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा मात्रै ५०० प्रजातिका चरा पाइन्छन् जसमध्ये १०० स्तनधारी प्रजाति छन्,” उनले भने, “नेपालमा पाइने ८८७ प्रजातिका चरामध्ये गण्डकीमा मात्रै कम्तीमा ६०० प्रजाति पाइन्छन् ।”